ကန်စွန်းရွက်စားပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ကန်စွန်းရွက်စားပါ
Posted by the best on Sep 17, 2012 in Health & Fitness | 32 comments
MONDAY, SEPTEMBER 17, 2012 အိမ့်သံစဉ်
ကန်စွန်းရွက်၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ.….
(ကောင်းလွန်လို့နေတိုင်းတောင် စားသင့်ပါသည်လို့ အကြံပြုပါသည် )
သင့်ချစ်ဇနီးက ကန်စွန်းရွက်ကြော်၊ ကန်စွန်းရွက်သုပ်၊ ကန် စွန်းရွက်ချည်ရည်ဟင်း စသဖြင့်
ကန်စွန်းရွက်ကို ပင်တိုင်စံ ဟင်းတစ်ခွက်လို မပါမဖြစ် ချက်ပြုတ်ကျွေးတဲ့အခါ
“ဒီနေ့ လည်း ကန်စွန်းရွက်ပဲလား ကွာ” ဆိုပြီး မညည်း တွားလိုက်ပါနဲ့။
ကန်စွန်းရွက်မှာ ဗီတာမင်အေ၊ ဗီတာမင် B1၊ ဗီတာမင်စီ၊ ပရိုတင်းဓာတ်၊ ကယ်ေလ်စီယမ်၊
ဖော့စ်ဖရပ်စ်၊ သံ ဓာတ်၊ ကာရိုတင်းစတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ များစွာပါဝင်တာကြောင့်
သင့် ကျန်းမာရေးအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အရွက်တစ်မျိုး ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကန်စွန်းရွက်ဟာ အိပ်မပျော်တဲ့သူ ဒါမဟုတ် အိပ်ပျော်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ သူတွေအတွက်
အိမ်သုံးသဘာ ဝဆေး တစ်လက်လိုမျိုး အသုံးဝင်ပါတယ်။
ကန်စွန်းရွက်ဟာ အိပ်မော ကျအောင် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိလို့ပါ။
ကန်စွန်းရွက်ကို စားရင် အချိန် ကြာကြာ အိပ်ပျော်စေတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ
အိပ်စက်မှု အရည်အသွေးကို ပြည့်ဝစေ တာကြောင့် နိုးထလာတဲ့အခါ လန်းဆန်းစေနိုင်ပါတယ်။
ကန်စွန်းရွက်မှာ အလေးချိန်တူ ခရမ်းချဉ်သီးထက် ပရိုတင်းဓာတ် လေးဆပိုမို ပါဝင်ပြီး
ကယ်လ်စီယမ်ပါဝင်မှုက ၁၂ ဆပိုများကာ ကာရိုတင်းဓာတ်လည်း ပိုမိုပါဝင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကန်ဇွန်းရွက်မှာ အမျှင်ဓာတ်များစွာ ပါဝင်တာကြောင့် အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်း
လှုပ်ရှားမှုကို ကောင်းမွန် စေပြီး ဝမ်းမှန်မှန်သွားစေပါတယ်။
ကန်ဇွန်း ရွက်ကိုစားပြီးချိန်မှာ အူထဲရှိ အက်စစ်ဂုဏ် သတ္တိကို လျော့ကျ စေတာကြောင့်
အူလမ်း ကြောင်း Flora မမျှတမှုမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်
ကင်ဆာ တားဆီး ပေးတဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။
ကန်စွန်းရွက်ကို ဝမ်းနုတ်ဆေး၊ သန်ချဆေးအဖြစ် ကျန်းမာရေးဆိုင် ရာကျွမ်းကျင် သူတွေက
ယုံကြည် ကြသလို ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချလိုသူတွေ အတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်။
ကန်စွန်းရွက်ဟာ ဝမ်းချုပ်တာ၊ လိပ်ခေါင်းဖြစ်တာတွေကို သက် သာစေသလို
ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျလိုသူတွေအတွက်လည်း တခြား အစားအသောက်တွေနေရာမှာ
အစားထိုး စားသင့်တဲ့ အစာပဲဖြစ် ပါ တယ်။
သွေးတိုးနေ သူတွေမှာ ကန်စွန်းရွက်ကို စားပေးရင်သွေးဖိအားလျော့ ကျစေပါတယ်။
ကန်စွန်းရွက် ဟာ သွေးကြောထဲရှိ အဆီတွေ ကင်းဝေးစေရေးအတွက် အရေးပါပါတယ်။
(၅) သိုင်းရွိုက်ဂလင်းရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်
ကန်စွန်းရွက်မှာ ကယ်လိုရီပါဝင်မှု နည်းပြီး ဗီတာမင်အေ၊ ဗီတာမင်စီ ၊ ဖောလစ်အက်စစ်၊
ဆာလဖာ၊ သွပ်(ဇင့်)၊ ပိုတက်စီယမ်၊ ဖော့စ်ဖရပ်စ်၊ အိုင်အိုဒင်းနဲ့ သံဓာတ်တို့ ပါဝင်တာကြောင့်
သိုင်းရွိုက် ဂလင်းရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင် တာတွေကို ထိန်းချုပ် ပေးနိုင်ပါတယ်။ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ပါဝင်မှုမြင့်မားတာကြောင့် ကင်ဆာမဖြစ်အောင်
ကာကွယ်ပေးနိုင် သလို နှလုံးရောဂါကိုလည်း ကင်းဝေးစေပါတယ်။
ကန်စွန်းရွက်ကို သုပ်ပြီး စားတာကြောင့် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ အအေးမိတာ၊ချောင်းဆိုး တာ နဲ့ လေပြွန်ရောင်ရမ်းတာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။
ကန်စွန်းရွက်မှာ အမိုင်နိုအက်စစ်အများအပြားပါဝင်ကာ အဆိပ်တား အာနိသင် ၊
ရောင်ရမ်း မှုကျစေတဲ့ အာနိသင်၊ ဆီးသွား စေတဲ့ အာနိသင်နဲ့ အိပ်မောကျစေတဲ့ အာနိသင်တွေကိုရရှိစေပါတယ်။
(၇) ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်
ကန်စွန်းရွက်ကို အဆိပ်ပြေစေတဲ့ဆေးတစ်လက်လို အသုံးပြုကြပါတယ်။
အစားမှား တာကြောင့်အော့အန် တဲ့ ဝေဒနာတွေကို သက်သာစေတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
ကန်စွန်းရွက်မှာပါတဲ့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက မကောင်းတဲ့ ဖရီးရယ်ဒီကယ်တွေကို ကင်းစင်စေတာကြောင့် ရောဂါများစွာ၊ အထူးသဖြင့် ကင်ဆာရော ဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
နဂိုကမှ ကန်စွန်းရွက် ကို ကြိုက်ပီးသား…
ခုလို ကျမ်းမာရေးအတွက် များကြီးအထောက်အပံ့ ရဒယ်ဆိုတော့…
စားအုံးမှာ… ကျေးဇူးပါဘဲရှင်.. ကန်စွန်းရွက်ရဲ့ အကျိုးအာနိသင်တွေ သေသေချာချာ သိခွင့်ရဒါ…
ကန်စွန်းရွက်ရဲ့ အကျိုးပြုတဲ့ ဓါတ်တွေအကြောင်း အရင်က အန်ကယ်ခင်ခလေး နည်းနည်းရေးခဲ့ဖူးတယ် ။ အခုအစ်ကို ထပ်ရေးတဲ့အတွက် ပိုပြ
အသီးမှာ သရက် ၊ အသားမှာ ၀က် ၊ အရွက်မှာ လ္ဘက်လို့ ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့် ….
ကျွန်မအတွက်တော့ ..အရွက်ထဲမှာ ကန်စွန်းရွက်ကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ .. ကြော်လည်းကြိုက်တယ် ၊ ချဉ်ဟင်းချက်လည်း ကြိုက်တယ် ၊ သုပ်စားလည်းကြိုက်တယ် … အိမ်ကတောင် ကန်စွန်းရွက်ကြိုက်တဲ့ ကျွန်မကို ရေမြင်းသေလို့ ၀င်စားသလားလို့ ပြောယူရတဲ့အထိပါပဲ
ဒီလရော ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ လရော …. ညဘက်တိုင်း မရိုးနိုင်အောင် စားမိနေတာကတော့ ကန်စွန်းရွက်ကြော်ပါ ။ ဆီပါတယ်ဆိုရုံလောက်နဲ့ ကော်ရည် ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် ၊ ကြက်သွန်ဖြူးဓါးပြားရိုက်၊ ငရုတ်သီးစိမ်းခြမ်းလေးတွေနဲ့ …. ကြော်ထားတဲ့ ကန်စွန်းရွက်တစ်ခွက်က ဘယ်အချိန်စားစား မရိုးသွားဘူးလေ … ။ ဓါတ်ပုံလေး ကြည့်ပြီး သွားရည်ကျသွားပြီ … ရှလွတ် … ရှလွတ် …. ဟီးးး
ကန်စွန်းရွက်ရဲ့ အကျိုးပြုတဲ့ ဓါတ်တွေအကြောင်း အရင်က အန်ကယ်ခင်ခလေး နည်းနည်းရေးခဲ့ဖူးတယ် ။ အခုအစ်ကို ထပ်ရေးတဲ့အတွက် ပိုပြီးပြီးပြည့်စုံသွားပါတယ် ။
ဒီလရော ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ လရော …. ညဘက်တိုင်း မရိုးနိုင်အောင် စားမိနေတာကတော့ ကန်စွန်းရွက်ကြော်ပါ ။ ဆီပါတယ်ဆိုရုံလောက်နဲ့ ကော်ရည် ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် ၊ ကြက်သွန်ဖြူးဓါးပြားရိုက်၊ ငရုတ်သီးစိမ်းခြမ်းလေးတွေနဲ့ …. ကြော်ထားတဲ့ ပူပူနွေးနွေးနဲ့ ခပ်စိမ်းစိမ်း ကန်စွန်းရွက်တစ်ခွက်က ဘယ်အချိန်စားစား မရိုးသွားဘူးလေ … ။ ဓါတ်ပုံလေး ကြည့်ပြီး သွားရည်ကျသွားပြီ … ရှလွတ် … ရှလွတ် …. ဟီးးး
ကစွန်းရွက်တော့ အတော်များများ စားကြပါတယ်၊ ကျောင်းပြီးကာစ အလုပ်စလုပ်တုန်းကဆို လစာထုတ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေ ဘီယာဆိုင်သွားရင် ကစွန်းပလိမ်တော့မှာကြတယ်လေ၊ ငွေလည်းသက်သာ စားလို့လဲ ကောင်းသမို့ပေါ့။
ဒီကနေ့လည်း ကန်စွန်းရွက်နဲ့ ပဲပြားခရမ်းချဉ်သီးချက် စားရပါတယ်။ ကန်စွန်းရွက်ကကိုယ်အလေးချိန်ကျတယ်ဆိုပါလား… တော်ပြီ မစားတော့ဘူး။ မရှိတဲ့အလေးချိန်တွေကျသွားရင်တော့ မလွယ်ဘူးပဲ။
ယိုးဒယာ:ဆိုင်မှာ.. ကန်စွန်းရွက်တွေ.. တပေါင်.. ၂ဒေါ်လာလောက်နဲ့ရသမို့.. ၃ပေါင်လောက်ဝယ်လာတယ်.
ပုဇွန်ဆိတ် ပိစိလေးတွေလည်း.. ၀ယ်လာတယ်..။
ယူအက်စ်က.. အဖြူတွေကတော့.. ကန်စွန်းရွက်စားကြပုံမပေါ်ဘူး..
ဪ… ငယ်ငယ်လေးကတိုင်အခုချိန်ထိ ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ ဒီကစွန်းရွက်က ဒီလောက် အသုံးဝင်၊ အကျိုးရှိမှန်းမသိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ချင်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပါစေ၊ အရက်သောက်လို့ မူးနေရင်တောင် ကဇွန်းရွက်ကို မစားပါရစေနဲ့တော့……….။
ကျွန်မလဲ ကန်စွန်းရွက် ကို အရမ်းကြိုက် လို့ တုန်တုန် ပြောသလို ရေမြင်း ဝင်စား သလားဘဲ။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ က တောမှာနေတာဖြစ်လို့ အဲဒါတွေ ဝယ်လို့ ရတဲ့ နေရာ မရှိဘူး။
အိမ်ပြန်ရင်တော့ နေ့တိုင်း ကန်စွန်းရွက် ကြော် နဲ့ စားတာ။
မှိုတောင် မထည့်ခိုင်း ဘဲ ဒီ အတိုင်း ကောင်းမှကောင်း။
အခုတော့ ပုံလေးကို ကြည့်ပြီး စိတ် နဲ့ စားသွားပါတယ်။
တစ်ခုသတိရလို့ ပါ တစ်ချို့က မှို နဲ့ ကစွန်းရွက် ရောကြော်ပြီးစားကြတယ်၊ အယူအဆကတော့ မှိုရဲ့ အဆိပ်အတောက်ကို ကစွန်းရွက်ကခြေဖျက်လို့တဲ့၊ အဲဒီမှာတစ်ခုသတိထားရမှာက မှိုပမာဏထက် ကစွန်းရွက်ပမာဏ မနည်းဖို့လိုပါတယ်၊ အရိုးရှင်းဆုံးပြောရရင် အဆိပ်အတောက်ဖြေမယ့် အရွက်ကနည်းနေရင် မထိရောက်နိုင်တဲ့သဘောပါ။ မှိုကစွန်းကြော် စားဖြစ်ကြသူများအတွက်ပါ။
ကျွန်တော်က ကန်စွန်းရွက်ကြိုက်တယ်… ကိုက်လန်ကြိုက်တယ်… မုန်ညှင်းရွက်အမျိုးမျိုးကြိုက်တယ်…
ဘေဘီကွန်း (ပြောင်းဘူးသားလေး) ကြိုက်တယ်… မှိုကြိုက်တယ်… ချဉ်ပေါက်ကြော်ကြိုက်တယ်…
ကျွန်တော်က ဘီယာဆိုင်မှာရတဲ့ အရွက်အကုန်ကြိုက်တယ်တဲ့…
ပြထားတဲ့ ပန်းကန်ကိုက သွားရည်ကျစရာပါလား………..
ကန်စွန်းရွက် ကတော့ကြိုက်တယ်ဗျို့ ..
ဒါနဲ့ မသိလို့ တရုတ်ကန်စွန်း၊ ဗမာကန်စွန်း နှစ်မျိုးမှာ ဘယ်ကန်စွန်းက ပိုအားရှိလဲဗျ ..
တောသူဆိုတော့ ဗမာကန်စွန်းပိုကြိုက်လို့ မေးမိတာပါ …
အဲ့ဒီမှာလည်း ပုံစံတူလေးတွေ့ ထားလို့ပါနော်
ဘယ်သူက အရင်တင်တာလဲတော့ မသိဘူးပေါ့ဗျာ :grin:
ကိုယ်က ကိုယ်ရွာက လူတွေဖတ်စေချင်လို့ ကူးတင်တယ်။
သူလည်းသူ့ပရိသတ်အတွက် ကူးတင်တယ်။
အားလုံးက အများအကျိုးရှိမဲ့စာကို အားလုံးသိအောင်မျှဝေကြတာပါပဲ။
ဒီပို့ စ်ကို အရေးတယူ ဖတ်ပြီး မန့် ပေးကြတဲ့
Mon Kit ၊ etone ၊ ကိုခင်ခ ၊
kai ၊ ahnyartamar ၊ အရီးခင်လတ် ၊
ကြောင်ဝတုတ် ၊ eipu ၊ mayjuly တို့ နဲ့ တကွ
ပိုပြီးစားလို့ ကောင်းအောင် စီမံချက်ပြုတ်တဲ့နည်းတွေရှိရင်
မျှဝေပေးစေလိုပါတယ်။ အိမ်ရှင်မကို ချက်ကျွေးခိုင်မလို့ ပါ။
အဲ.. နာအကြိုက်ဆုံး အရွက်က အဲလောက်တောင် အကျိုးရှိတာလား…စားဦးမှာ…
အရင်တုန်းက မသိခဲ့ရတာ နှမြောတာကွယ်
ပြီးတော့ .. ကန်စွန်းရွက်စားပါ … ဆိုတော့ …
ကန်စွန်းပလိန်းလေးနဲ့ ဘီယာလေးနဲ့ တွဲလိုက်ရင်ဖြင့် ..
candle ကတော့ ကန်စွန်းရွက် ဆိုရင်..
မိုးအကုန် ဆောင်းအကူး လယ်ကန်သင်းရိုးဘေးနဲ့ 
လယ်ကွက် တွေထဲမှာ ပေါက်နေတဲ့…
လက်ကန်စွန်း လေးတွေကို ပိုကြိုက်ပါတယ်..
ဘဲဥ၊ လုံမလေး မွန်မွန်၊ မောင်ပေ ၊
မဟာရာဇာ အံစာတုံး၊ candle ၊တို့ ကိုလည်း
အခု ည ၉း၄၅ နာရီရှိနေပြီ။
ကန်စွန်းပလိန်းလေးနဲ့ ဘီယာလေးနဲ့ ဇိမ်ခံနေကြပြီလား။
ကန်စွန်းရွက်အရသာရှိရှိ ချက်ပြုတ်စားသောက် နည်းလေးသိချင်တယ်ဆိုလို့ရေးပေးလိုက်ပါတယ်
တကယ်တော့ကန်စွန်းရွက်ဆိုတာ ရေကန်တွေရဲ့အစွန်းမှာပေါက်လို့မို့ ကန်စွန်းရွက်လို့ခေါ်ဟန်တူပါတယ်
ကဲကဲဒါတွေထားပါ ကန်စွန်းမှာပေါက်လို့ပဲခေါ်ခေါ် ဘယ်မှာပဲပေါက်လို့ပဲခေါ်ခေါ်
ကန်းစွန်းရွက်ကိုအရသာရှိရှိစားလိုပါက ကန်စွန်းရွက် သက်သက်လွတ်အချိုချက်ချက်ပြုတ်စားသောက်နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော် အဖွားရဲ့ နှစ်ဝန်းကွဲ ညီမရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူလည်း တေားရွာလေးတစ်ရွာမှာသွားတုန်းက
ရခဲ့တဲ့နည်းကလေးဆိုပြီးကျနော် တို့ကိုပြောပြလို့ ကျနော်တစ်ဆင့်ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကန်စွန်းရွက် ၁၀ စည်းကိုရေဆေးပြီးတော့
မိမိကြိုတ်နှစ်သက်သလိုချက်စား ကြော်စား အရသာအလွန်ကောင်းသည်မှာ
ကျနော်ငယ်ငယ်က စားတော်ပဲပြုတ်ဆိုတာ ကျနော်တို့လို ဆင်းရဲသားတွေစားတာပါ။
အခုစားတော်ပဲပြုတ်ကို ကျနော်တို့ ပေါပေါများများမစားနိုင်တော့ပါဘူး။
ကန်စွန်းရွက်စားခြင်းရဲ့ အကျိုးအာနိသင်တွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရလို့ ကျေှးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်…
ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်း ကန်စွန်းရွက်ကိုကြိုက်ပါတယ် ..
အကုန်အကျလည်းသက်သာ ….. ဟီး
ကန်စွန်းရွက်ကို Water Spinach (or) Kangkong လို့ လူသိများပါတယ်..
River Spinach,Chinese Spinach ကစလို့Water Morning Glory ဆိုတဲ့
လှတပတနာမည်လေးပါမကျန် မဆုံးနိုင်တဲ့ နာမည်ခွဲတွေ ရှိပါသေးတယ်….
ကန်စွန်းရွက်က ရေထဲမှာ၊ရေပေါပေါများများရတဲ့နေရာနား၊ ဒါမှမဟုတ် စွတ်စိုတဲ့
မြေနေရာတွေမှာ ပေါက်လေ့ရှိတယ်…ကမ္ဘာ့အပူပိုင်းဒေသတွေမှာ ပေါက်ရောက်လေ့ရှိပြီး အရှေ့တောင်အာရှမှာ တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်..ရာသီဥတုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ သဘာဝ
ရှိပြီး ဂရုတစိုက်ပျိုးထောင်ပေးဖို့မလိုဘဲ အပင်တွေပွားလွယ်လို့ U.S. က Florida,
Texas လိုနေရာမျိုးမှာ ကန်စွန်းရွက် ပေါက်ပွားနှုန်းမြင့်မားတဲ့အတွက်ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်
ကိုတောင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသတဲ့…USDA က ကန်စွန်းပင်ကို အဆိပ်ရှိတဲ့ပေါင်းပင်
…..စားတဲ့အခါ တစ်ကယ်တော့အန္တရယ်မရှိပါဘူး..အဆိပ်အတောက်တောင် ပြေပါတယ်..
သွေးအားနည်းရောဂါနဲ့ သံဓာတ်လိုအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအတွက် ကောင်းလှ
သလို ၀က်စာ၊ငါးစာ အဖြစ်လည်းသုံးပါတယ်..
….တရုတ် နဲ့ မလေး ဟင်းလျာတွေမှာတော့ ကန်းစွန်းရွက်က ‘မရှိမဖြစ်မိုး’ ပါ…
ကန်စွန်းရွက်ကို မီးပြင်းပြင်းနဲ့ ကြာကြာကြော်၊ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာ သူ့အရသာ
ပျက်ယွင်းသွားသလို ကန်စွန်းရွက်ရဲ့အဟာရတန်ဖိုးတွေပါ ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်..
အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ ကန်စွန်းရွက်ကို နွမ်းရုံ စိမ်းစိမ်းလေး မွှေကြော်လေး
မလေးရှားမှာတုန်းက စားခဲ့ရတဲ့ကန်စွန်းရွက်ကြော်ကတော့ ကြက်သွန်ဖြူများများ၊
ငရုတ်သီးခွဲခြမ်းတွေရော၊ငရုတ်သီးအနီတောင့်ရှည်တွေပါ(red bird’s eye chilli pepper
ငရုတ်သီးနဲ့အတော်တူတယ်…မြန်မာပြည်က မိုးမျှော်လိုမျိုး အတောင့်ကြီးကြီး၊
ရှည်ရှည်၊ချွန်ချွန်တွေပါ) ပါးပါးလှီးထည့်ထားတဲ့အပြင် စိမ်းစားငါးပိအရသာလေးနဲ့
နည်းနည်းစပ်တပ်တပ်နဲ့ ထမင်းမြိန်သွားလို့ အသားတွေတောင်မစားတော့ဘဲ ၂ပွဲတိတိ
အဲဒါနဲ့ပဲ စားခဲ့တာ အမှတ်ရမိပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ တစ်ပွဲမှ မြန်မာအခေါ် ငါးမူး
( one ringgit ရဲ့တစ်ဝက် 50 sen ထင်) ပဲပေးရပါတယ်။
– ပုစွန်ငါးပိ(စိမ်းစားငါးပိ) သို့ ငံပြာရည် သို့/နဲ့ ခရုဆီ သို့ ကြက်သားမှုန့်တို့ကိုတော့
– ပဲပြား၊၀က်သား၊အမဲသားတို့နဲ့လည်းတွဲပြီး ကြော်ချက်စားလို့ရပါတယ်(မရေးတော့ပါဘူး)
– spice ကတော့ ခုန ရထားထွက်မဲ့ ငရုတ်သီးရယ်(မရရင် ဒီကငရုတ်)၊ဂျင်း၊ကြက်သွန်ဖြူ၊
ကြက်သွန်နီ၊ငရုတ်ကောင်းတို့ကိုတော့ ကိုယ့်အကြိုက် လိုတာထည့်သုံးကြပါလို့။
– ကော်မှုန့်မရှိရင်လည်း ပြောင်းဖူးမှုန့် သုံးနိုင်ပါတယ်။
စာရေးရင်းကနေ ကိုယ့်အကြိုက်၊ ကိုယ့် own recipe ဖြစ်မယ့် stir-fried water spinach
(ကန်စွန်းရွက်မွှေကြော်)ကို လုပ်စားဖို့ သိသလောက်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်….
အင်္ဂလိပ်နာမယ်မသိလို့.. တွေးနေတာ.. ဒီကော်မန့်လေးကယ်လို့ပဲ..။
“ရထားထွက်မဲ့ ငရုတ်သီး” ဆိုတာဘာလည်းဟင်င်င်..
– ဟုတ်ကဲ့..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်…ကန်စွန်းရွက်ကြော်ရင် အရိုးဖြူဖြူ၊ပွပွ၊အရွက်
ဖားဖား တရုတ်ကန်စွန်းရွက်က မမဲလွယ်ဘဲ နူးညံ့ပြီး စားရတာ အရသာရှိဆုံး၊
အကောင်းဆုံးပါ….အရွက်(အရိုးပါ,ပါ)ကို နွမ်းရုံ စိမ်းစိမ်းလေးပြုတ်ပြီး ပဲမှုန့်၊သံပုရာ၊
ငံပြာရည်၊ပုစွန်ခြောက်မှုန့်( သို့ ကြက်သားမှုန့်)၊ငရုတ်သီးစိမ်း၊နှမ်းထောင်းလေး
ထပ်ပိုးလို့ ကြက်သွန်နီဆီချက်လေးနဲ့ သုပ်စားရင်လည်း လျှာပေါ်စွဲစေမယ့်
တစ်မျိုးကောင်းတဲ့ own recipe အသုပ်လေးပါ…
– ထိုင်ဝမ်ကန်စွန်းလည်း (အရွက်ချွန်ချွန်သွယ်သွယ်၊ အရိုးစိမ်းစိမ်းပိန်ပိန်) ကြိုက်သူ
– မြန်မာကန်စွန်းလို့လည်းပြောကြတဲ့ (တရုတ်ကန်စွန်းနဲ့အတော်ဆင်လို့မှားဝယ်
မိတတ်)ကန်စွန်းကျတော့လည်း ကြော်ရင် မဲလွယ်ပြီး ဖန်တွတ်တွတ်နဲ့မို့ မကြိုက်ပါ..
– ကန်စွန်းရိုးနီကတော့ အဖန်ဓာတ်ရှိလို့ တို့စရာ၊ချဉ်ဖတ်၊ချဉ်ရည်အနေနဲ့ပဲ
ကောင်းပါတယ်လို့..သူကြီး ကျေးကျေး ထောက်ပြီး ကျန်သွားတာ ထပ်ဖြည့်
‘ရထားထွက်မဲ့ ငရုတ်သီး’ ဆိုတာ ရေးရတာ ရှည်လွန်းလို့တင်စားထားတာပါ..
စာထဲမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကို ပါပါတယ်ရှင့်…သိသိနဲ့ သူကြီး မသိချင်ယောင်
Kyaw Myo Thet ၊ကြောင်လေး ၊Tin Tin ၊Phaung Phaung ၊ နဲ့ Hnin Hnin တို့ ကို
Hnin Hnin ပြောပြတဲ့ နည်းနဲ့ ကြော်ပြီးရင် ကျွေးဖို့ ဖိတ်လိုက်ပါ့မယ်။
ကဇွန်းရွက်က တရုပ်ကဇွန်းနဲပဗမာကဇွန်း ၂မျိုးရှိတယ်ကြားဖူးတယ်။ အရိုးနီနဲ့ဗမာကဇွန်းက ပိုဆေးဘက်ဝင်တယ်လို့ကြားဖူးတယ်။
မြန်မာကန်စွန်း အရိုးနီကို ချဉ်ဖတ်တည်ပြီး ငပိနဲ့တို့စားရင် ခံတွင်းသိပ်မြိန်တာဗျ…။
ကန်စွန်းရွက်နဲ့ ကင်ပွန်းချဉ်ရွက် ရောပြီး ပုဇွန်ခြောက်လို အဆာလေးနဲ့ကြော်စားရင်လဲ အရသာထူးတယ်။
တကယ်တော့ ဒီအတိုင်းပြုတ်တို့ရင်လဲ ကောင်းတာပါပဲ။
တရုတ်ကန်စွန်းကို ခရုဆီလေးနဲ့ ကော်ရည်ထည့်ကြော်လိုက်ရင်လဲ ရွှေဘဲက တပွဲ ၂၈၀၀ ယူတဲ့ ကန်စွန်းပေါင်းနဲ့တထေရာထဲ အရသာထွက်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်လောက်က အင်္ဂလန်ရောက်သူငယ်ချင်း ပြန်လာလည်တုန်းပြောသွားတာတော့ လန်ဒန်မှာ ကန်စွန်းရွက်က ကြက်သားထက် ဈေးကြီးသတဲ့…။